Iinkonzo ze-2016 zeMacBook azixhasi ngaphezulu kwe-16 GB ye-RAM emva kohlaziyo | Ndisuka mac
I-2016 MacBook Pros ayinakho ukuxhasa ngaphezulu kwe-16GB ye-RAM emva kokuphuculwa
Lo ngomnye wemicimbi abasebenzisi abaninzi abakhalaze ngayo bakubona nje ukuboniswa kwe-MacBook Pro entsha ekupheleni kuka-2016. Kule meko, ingxwabangxwaba ephakanyiswe kukungabikho kokukhetha kwe-32 GB yememori ye-RAM iphinde yaqinisekiswa. kolu hlaziyo lutsha kunye Asisiqondi isizathu sokuba iApple ingadibanisi ukhetho lokukhetha le mali ye-RAM Kwiikhompyuter namhlanje ezinokubamba kwimemori engama-32 GB.
Ngelo xesha, kwaye ebona "umsindo" jikelele wabasebenzisi abaqeqeshiweyo, uPhil Schiller ngokwakhe weza ngaphambili ukuzokukhusela isigqibo esithathiweyo sokunciphisa isixa se-RAM ukuze ukuzimela kwezixhobo kube ngaphezulu ukongeza uyilo olutsha lwezi zithintele ukufakwa kwazo. Kwaye kwafika okwenzekileyo ngovavanyo olwenziwe ziNgxelo zabaThengi kunye nokuzimela kwezi Macs zintsha esele sazi sonke ...
Emva koqhwithela, abahlalutyi abaninzi baxela kwangaphambili ukuba kwisizukulwana esilandelayo seekhompyuter kuya kubakho ubumbeko nge-32 GB ye-RAM, kodwa ngeli xesha xa i-Intel Kaby Lake entsha ifikelele kwi-2016 MacBook Pro kunye neekhompyuter ze-Apple , Siyaqonda ukuba olu khetho alufumaneki kwaye iiMacs kuphela ezineFusion Drayivu phambili ukuvumela umsebenzisi ukuba alungiselele i-32GB ye-RAM.
Sakuba sikubonile oku, asithandabuzi ukuba iprosesa inokuba nesiphoso kwi-32 GB ye-RAM ayinakunyuswa, kodwa Uyilo lwezi Pros zintsha zeMacBook inokuba sesona sizathu siphambili sokuba iApple ingalivumeli eli nani lememori. Kwelinye icala, kufuneka kuthiwe nge-16 GB ye-RAM ingaphezulu nje kokusebenza namhlanje, kodwa imfutshane kwixesha elide ukuba siceba ukugcina izixhobo iminyaka embalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » these Pro » I-2016 MacBook Pros ayinakho ukuxhasa ngaphezulu kwe-16GB ye-RAM emva kokuphuculwa
Ndingabunyusa kancinci ubukhulu ndongeze ibhetri engaphezulu kunye nokubanakho kokunyusa i-RAM iye kuma-64 GB ukuba ibiyi-Apple. Ngokwenza oku andicingi ukuba kuya kwenzeka nantoni na, kuba ukuphuculwa kweenkcukacha kuya kulwa noyilo "olubi".
Kwimeko yam kufuneka ndiphakamise oomatshini abambalwa bokunyusa iiseva kwi-macbook pro yam, nge-16 Gb kwinkunzi yegusha ndimfutshane, ndiyathemba ukuba kamva bayakukhetha ukhetho lwe-32Gb, kungenjalo kuya kufuneka ndikhangele enye indlela.
Bhalisela inkqubo ye-beta yesoftware ka-Apple ukuzama iMacOS ePhakamileyo yeSierra
Inkqubo yeFayile yeApple iqala ngamacOS ePhakamileyo eSierra